Ọzụzụ Ahịa | Martech Zone
Nchịkọta, ịre ahịa ọdịnaya, ịre ahịa email, ịre ahịa injinị, ịre ahịa mgbasa ozi mmekọrịta, na ọzụzụ teknụzụ na Martech Zone
Fraịdee, Nọvemba 12, 2021 Fraịdee, Nọvemba 12, 2021 Douglas Karr
N'ime afọ ndị gafeworonụ, etinyere m ma jikọta ọtụtụ nyiwe mgbasa ozi ọha maka ndị ahịa. Mụ na ọtụtụ ndị ka na-enwe mmekọrịta dị ukwuu ma ị na-aga n'ihu ịhụ ka m na-akwalite nyiwe ọhụrụ na ndị dị adị. Nke ahụ nwere ike mgbagwoju anya na-agụ… na-eche ihe mere m na-adịghị nnọọ nwere ike ikwu na inupụ otu ikpo okwu maka onye ọ bụla. Anaghị m n'ihi na mkpa ọ bụla nke ụlọ ọrụ ọ bụla dị iche na ibe ya. Enwere plethora nke usoro mgbasa ozi ọha na eze nwere ike inyere azụmaahịa aka… mana nke gị
Anyị na-anọgide na-arụ ọrụ na njikarịcha ndu anyị maka ndị ahịa anyị. Mgbe anyị na-enyocha ma na-enye ndị ahịa anyị ihe na-ezighi ezi na ihe kpatara na ọ dị njọ, ọ dị mkpa na anyị ga-enyekwa nduzi otu esi emezi nsogbu ahụ. Mgbe anyị na-enyocha ndị ahịa anyị, ọ na - eju anyị anya oge niile maka mbọ dị ntakịrị enyere iji bulie ọnụnọ Youtube ha yana ozi metụtara ya na vidiyo ha buliri. Imirikiti dị na bulite vidiyo ahụ, debe aha,
Tọzdee, Machị 18, 2021 Wednesday, October 13, 2021 Douglas Karr
JungleScout: Ngwaọrụ na Ọzụzụ Iji Launch Ma Tolite Gị Ahịa On Amazon
Tuzdee, Machị 16, 2021 Tuzdee, Machị 16, 2021 Douglas Karr
Onweghi ihe na - ekwesighi mmetụta nke Amazon na mkpọsa na ahia. Ghara ikwu banyere mbibi nke mere na ụlọ ahịa na-ere ahịa n'ihi ọrịa na-efe efe na mkpebi na-esote ịgbachi ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke obere ndị na-ere ahịa. Taa, ihe karịrị pasent 60 nke ndị na-azụ ahịa na-amalite nyocha ọchụchọ ha n'ịntanetị na Amazon. Ego Amazon si n'aka ndị na-ere ahịa ya rịrị ihe karịrị 50 pasent na 2020 ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga. 2021 Ga-eweta